दक्षिण कोरियाको सीवीटी परीक्षा फर्म खुल्ने बारेमा सूचना…. सबैले एकपल्ट हेर्नुहोस – पुरा पढ्नुहोस्……
दक्षिण कोरियाको सीवीटी परीक्षा फर्म खुल्ने बारेमा सूचना…. सबैले एकपल्ट हेर्नुहोस
इपिएसमार्फत दक्षिण कोरियामा तीन वर्ष काम गरी नेपाल फर्केका कामदारलाई पुन: काम गर्न आउने कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा (सीवीटी) यो वर्ष खुल्ने भएको छ ।
गत वर्ष स्थगित गरिएको सीवीटी (स्पेसीयल इपिएस टपिक) परीक्षा यो वर्ष २ पटक लिइने इपिएस सेन्टर नेपालले जनाएको छ । आगामी वर्षको लागि प्रतिबन्धित कामदारको लागि लिइने सीवीटी परीक्षाको फर्म अप्रिल महिनाको पहिलो साता र अगस्टको दोस्रो साता खुल्ने भएको छ ।
यस वर्षदेखि टोपिक लेभल, कार्यक्षमता र फर्किएको कामदारको समयावधिको आधारमा प्वाइन्ट पनि थपिने व्यवस्था गरिने छ । सन् २०१० जनवरी १ देखि नेपाल फर्केका कामदारले यो परीक्षामा सहभागिता जनाउन पाउने भएका छन् ।
३९ वर्षभन्दा मुनिका कामदारले परीक्षा दिन पाउने छन् । कोरियामा गैरकानुनी नबसेको र नेपाल फर्किंदा इन्छन विमानस्थलमा एलियन कार्ड बुझाएको हुनुपर्ने र प्रहरी काण्ड नपरेको कामदारले सीवीटी परीक्षा दिन पाउने मानव संशोधन कोरियाले जनाएको छ ।
Prevलिदै नलिएको ५५ लाख ऋण लिएको भन्ने बैंकको यस्तो कालो कर्तुतको पर्दाफास गरे रविले(भिडियो)
Nextदुर्लभ वन्यजन्तुको चोरी–सिकारीमा संलग्न पक्राउ
सानो छदां डा. उपेन्द्रसंग पढेको फोटो राख्दै बाबुरामले लेखे मार्मिक स्टाटस ..
चितवनका विनोद रानाभाटलाई कतारमा मृ*त्युदण्ड नदिइएको पुष्टि .. बिक्षप्ती सहित पूरा खबर हेर्नुहोस्.
डलरको भाउ घट्दो , साउदी कतार, दुबई मलेसिया लगायत विभिन्न देशको बिदेशी मुद्राको आजको विनिमय दर यस्तो छ …..